Umvelisi wentsimbi yeChina kunye noMthengisi | URuiyi
I-roller lawn ilungele ukucima umonakalo kwaye inceda ukuseka ukukhula okutsha kwengca egqibeleleyo, esempilweni. Ukhetho lokuqala lwesithuthi sangaphandle sokuzonwabisa, esiluncedo, esisebenzayo nesifanelekileyo. Ukukhuselwa kwendalo ngaphambi kokutyala imbewu yengca entsha, irola enetyani inokunceda kwinqanaba elingalinganiyo lomhlaba. Emva kokuhlwayela, ukuqengqeleka kunceda ukukhawulezisa ukuntshula ngokuqinisekisa ukuba imbewu iyadibana nomhlaba. Sebenzisa irola-roller egcwaliswe ngamanzi ukunceda isod entsha ukuba isungulwe, isuse iipokotho zomoya kunye nokuqinisekisa iingcambu zinxibelelana nomhlaba. Ukuba iimpuku kunye nezinambuzane zonakalise ingca yakho, iroller yokutshiza inceda ukugudlisa ingca ukuze ifane.
Roller ingca ikunceda wenze ingca yakho ibenomona kubamelwane bakho kuba isusa umonakalo obangelwe zizilwanyana namaxesha onyaka.
Ukhetho lokuqala lwe isithuthi sangaphandle sangaphandle, elula, iyasebenza kwaye ngokufanelekileyo. Ukhuselo lokusingqongileyo.
Zotywe ngumsebenzi onzima wedrawbar kunye nokuqengqeleka kwiibheringi, dia.
Igubu linika ubunzima oboneleyo kowona msebenzi unzima wokuqengqeleka, ngelixa isiphelo esijikeleziweyo siphatha i-turf yakho kwaye sivumela ukuqhuba ngokulula.
Ukutyabeka umgubo kukukrwela kunye nemozulu ukumelana.
Ukugcina ngokulula: xa uqengqa ingca yakho, yidreyini nje uze uyixhome le roller igaraji, okanye ikhabhathi ithatha indawo encinci.
I-roller engenanto ilula kwaye kulula ukuyithutha.
Kuphephe ukonakala kwengca: ukuphela kwesilinda kunceda ukuthintela ukonakalisa ingca ngexesha lokujikeleza, ngelixa ibar yesinyithi eshushu ngaphezulu kwegubu ikhusela i-roller kubutyobo xa uqengqeleka.
Ikhonkco le-Universal: iqulethe uxanduva olusindayo lwe-hitch pin ukuze unamathele ngokulula iroli kuye nawuphi na umkhweli okanye itrektara
Roller ingca Zikulungele ukucima umonakalo kunye nokunceda ukuseka ukukhula okutsha kwengca egqibeleleyo, esempilweni.
Emva kokuhlwayela, ukuqengqeleka kunceda ukukhawulezisa ukuntshula ngokuqinisekisa ukuba imbewu iyadibana nomhlaba.
Sebenzisa irola-roller egcwaliswe ngamanzi ukunceda isod entsha ukuba isungulwe, isuse iipokotho zomoya kunye nokuqinisekisa iingcambu zinxibelelana nomhlaba.
Ukuba iimpuku nezinambuzane zonakalise ingca yakho, a roller ingca inceda ukugudlisa ingca ukuze zifane.
Xa ulungisa izitiya kwaye ingca, ungasebenzisa eyethu umthetho mqengqeleki, Umthetho wethu mqengqeleki unokunceda ukuseka ukukhula okutsha ngokugqibeleleyo, ingca esempilweni. Ukhetho lokuqala lwesithuthi sangaphandle sokuzonwabisa, esiluncedo, esisebenzayo nesifanelekileyo. Ukukhuselwa kokusingqongileyo Ngaphambi kokutyala imbewu yengca entsha, iroller roller inokuncedaumgangatho ongalinganiyo. Emva kokuhlwayela, ukuqengqeleka kunceda ukukhawulezisa ukuntshula ngokuqinisekisa ukuba imbewu iyadibana nomhlaba. Sebenzisa irola-roller egcwaliswe ngamanzi ukunceda isod entsha ukuba isungulwe, isuse iipokotho zomoya kunye nokuqinisekisa iingcambu zinxibelelana nomhlaba. Ukuba iimpuku kunye nezinambuzane zonakalise ingca yakho, iroller yokutshiza inceda ukugudlisa ingca ukuze ifane.
Le mveliso kulula ukuyifaka. Nceda ujonge kufakelo kunye nencwadana yokusebenza.
Abathengi ngokubanzi banika ingxelo yokuba isiphumo sokusetyenziswa silungile, ukusebenza ngokulula, ukufakelwa okufanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu
Egqithileyo Isithuthi sokuzonwabisa sangaphandle
Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, I-China i-PU Foam Isondo, Isondo le-China PU, Ivili likaCaster, DB Ivili, Umxube weKhonkrithi yase China,